लोकतन्त्रलाई लोकमान बनाउनेहरू
कृष्णमुरारी भण्डारी , ०, ० 3715 पटक पढिएको
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले सोमबार चितवन महोत्सव उद्घाटन गर्दै भनेछन्, सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीबारे गरेको फैसलाले धन्न 'हाम्रो' इज्जत बच्यो !
तर खासमा लोकमानहरूलाई टाउकामा चढाएर प्रचण्डको रहेसहेको इज्जत पनि गुमिसकेको छ । बुझेर पनि उनले बुझ पचाइरहेकाले उनको चितवन भनाइ कसैलाई हजम भएन । खासमा उनी हरेक दिन नयाँ पहिरन लगाउने दन्त्यकथाको बादशाह झैं बनिरहेका छन्, जनताका नजरमा ।
खासमा लोकमानमाथि भएको कारबाहीले प्रचण्डलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । हिम्मत भए, आफूले साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च अदालतले घोक्रेठ्याक लगाएर अख्तियार प्रमुख जस्तो संवेदनशील पदबाट गलहत्याउँदा उनले राजीनामा दिन सक्नुपथ्र्यो । तर नकच्चरो प्रवृत्ति देखाउँदै लोकमानलाई घोक्रेठ्याक लगाउँदा इज्जत बढेको पो ठानेछन् ! भन्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई लाज !!
यसै स्तम्भमा प्रचण्डले सुरुआत गरेका कामबाट सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्दै धेरै शब्द उनको सफलताका निम्ति खर्चिएको थियो तर अहिले यी शब्द लेख्दा आफैंलाई आत्मग्लानी भइरहेको छ । उनकै अग्रसरतामा लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाइएको थियो । उनैले डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई यसमा मतियार बनाएका थिए । लोकमान ल्याउन विजय गच्छदार र महन्त ठाकुरले पनि साथ दिएका थिए ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारलाई पहिलो निर्णय गराउन प्रचण्डको नेतृत्वमा उपरोक्त व्यक्तिहरूले सर्वदलीय सिफारिस बुझाएका थिए । त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले ०७० वैशाख २२ गते (प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी, कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, गृहमन्त्री माधव घिमिरे र मन्त्रीहरू रिद्धिबाबा र माधव पौडेलको हस्ताक्षरबाट) अनुमोदन गरेको थियो । वैशाख २५ गते राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकमानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदको शपथ गराएका थिए । लोकमानको नियुक्ति यही हो ।
लोकमान को थिए ? कसैले चिनाइरहनु पर्दैन । उनी पूर्वाञ्चलका धनवान् तथा राजसभा स्थायी समितिका सभापति भूपालमानसिंह कार्कीका छोरा हुन्, जसले सरकारी सेवा प्रवेश गर्दा परीक्षा दिनैपरेन । राजाको हुकुम प्रमांगीबाट सीधै उच्च सरकारी जागिर पाए र देशकै मुख्य सचिव बने । उनलाई जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि गठित न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वमा बनेको सर्वशक्तिमान आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
तर जनआन्दोलनको जस लिने र आफूलाई गणतन्त्रको नायक भन्ठान्ने प्रचण्डकै नेतृत्वमा सजाय माफ मात्र गरिएन, जनआन्दोलनविरोधी र भ्रष्टाचारीलाई क्रान्तिलगत्तै संवैधानिक आयोग त्यो पनि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको अध्यक्ष बनाउन पो पुगे ? क्रान्ति भएको ६ वर्षमै जनयुद्धका महानायकको साँठगाँठ, उठबस र मिलोमतो प्रतिगामी केन्द्रमा कसरी सम्भव भयो ? यो आफैंमा खोजी गर्नुपर्ने र युवापुस्तालाई सत्यतथ्य जानकारी दिनुपर्ने विषय हो ।
देशकै पुरानो र परिवर्तनकामी पार्टी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू कोइराला र देउवा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी (जसका वर्तमान अध्यक्ष केपी ओलीले कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएका छन्, तर त्यही पार्टी) का पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिगामी लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा के कारणले सिफारिस गरेका होलान् ? अझ मधेस आन्दोलनका मसिहा भन्ठान्ने महन्त ठाकुर र विजय गच्छदार के लोभले लोकमान नियुक्तिमा मतियार बनेका होलान् ?
यो अरू केही होइन, परिवर्तनकामी क्रान्तिकारी नेताहरूको चरम र घिनलाग्दो पतन हो । गरिब सर्वसाधारण नेपालीको मान-प्रतिष्ठा उठाउँछु भन्ने नेताहरूमा पटक-पटक देखिएको यो पतनको कारण नपहिल्याई नेपाली क्रान्ति र परिवर्तनले न सही बाटो लिन सक्छ न त क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारीबीचको साँठगाँठ नै बुझ्न सकिन्छ ।
तर छिमेकी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता महात्मा गान्धीको विगत यस्तरी खाडलमा पर्नेछ न त छिमेकी चीनका नेता माओले नै प्रतिगामीसँग यस्तो साँठगाँठ गरेको इतिहासमा देखिन्छ । सबैलाई जानकारी नै भएको हो, मोहनदास करमचन्द गान्धीले बेलायती उपनिवेशको राजधानी लन्डनमा वकालत पढेका हुन् । बम्बैमा कानुन व्यवसाय नजमेपछि उनी कामको खोजीमा दक्षिण अफ्रिका पुगे ।
सुट-टाई लगाएर वकालत गरे । तर जब उनी भारतलाई बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र पार्न स्वदेश फर्किए, उनले सुट-टाई फ्याँके र एउटा आम भारतीयको पोसाक धोती लंगोटी लगाए । लवाई-खवाई जनता-जनार्दनको जस्तै गरे । दरीमै सुते, अनि स्वतन्त्रताको लडाइँ लडे । जीवनशैली, आनीबानी, खानपिन र विधि व्यवहार पारदर्शी नै बनाएर बेलायती साम्राज्यलाई भारतबाट लखेटे ।
गान्धी यसरी स्थापित भएका र राष्ट्रपिता बनेका हुन्, तर हाम्रा नेता ? उनीहरूले लोकमानकै पैसाले पार्टी र गुट चलाए । चुनावमा लोकमानकै इसारामा चन्दा असुले । धन-दौलत थुपारे । स्वास्नीको पेवा भनेर किलोका किलो सुनचाँदी, गाडी, ब्यांक ब्यालेन्स र घर जमिन जोर्नुजोरे । आखिर राष्ट्रपिताको त कुरै छोडौं, जिम्मेवार सन्तानका अभिभावक पनि बन्न सकेनन् !
सबैलाई जगजाहेर नै छ, राणाशासन अघि नेपालमा ठूलो दरबार बनाउन र मोजमस्तीमा करोडौं खर्च गर्ने धन थिएन । राणाहरूको उदयपछि उनीहरूले म्यानपावर तस्करी गरे । न यिनले उद्योग व्यवसाय गरे न त रोजगार सिर्जना नै गरे । हृष्टपुष्ट, सुरा र साहसी गोरखाली युवाहरूलाई बेलायती सेनामा बेच्नु बेचे । वन विनाश गरे । कुतको नाउँमा सर्वसाधारण जनतालाई चुस्नु चुसे । देशको जग्गाजमिन आफ्नै नियन्त्रणमा राखे ।
जनताको रगतपसिना सोस्नु सोसे । अकूत सम्पत्ति सोहोर्नु सोहोरे । त्यो पैसा मोजमस्ती, सुरासुन्दरी र सनकमा उडाए । आलिशान महल बनाएर विलासी जीवन बिताए । तर जनता ? बीपी कोइरालाका बाबु कृष्णप्रसाद कोइरालाले श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरलाई पठाएको गरिब नेपालीको फाटेको कपडाको एउटा पुलिन्दाको कथाले नै देशको यथार्थ तस्बिर छर्लंग पार्छ ।
राणाशासनको अन्त्यपछि शाहहरूले राणाहरूकै सिको गरे । निर्वाचित सरकारलाई निमोठे । मोजमस्ती निम्ति केही बाँकी राखेनन् । विकृति विसंगति भित्र्याए । मूर्ति चोरी गरे । लागूपदार्थ तस्करी गरे । नमिता-सुमिता हत्याकाण्ड मच्चाए । व्यवसायीमाथि लाइसेन्स राज थोपरे । व्यवसाय गर्नेहरूसँग सलामी, कमिसन गरी राजस्व ब्रह्मलुट गरे । पञ्चायती ठालुहरू यही रहलपहलमा रमाए ।
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जब देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो र दलहरू सत्तासीन बने, उनीहरूको मनको पहिलो घोषणा टुँडिखेल खुलामञ्चबाट गिरिजाप्रसादले गरे- यो राजा, पञ्च, सबैको जित हो । टुँडिखेलमा जम्मा भएका सर्वसाधारणले यसको विरोध गरे । जनता चुप नभएपछि कमान्डर गणेशमानले जनता दबाउनेहरूमाथि कारबाही गर्ने विश्वास दिलाउँदै जनतालाई शान्त बनाए ।
तर अन्तरिम प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनआन्दोलनका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिक आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन नै राष्ट्रिय पुस्तकालयमा थन्क्याइदिए । ०४७को संसदीय निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई चुनाव हारे र गिरिजाप्रसाद देशको प्रधानमन्त्री बने ।
राणा, शाह र पञ्च शासकहरू नै कांग्रेस कम्युनिस्टका रोल मोडेल बने । ०५२ सालमा माओवादीले प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु गर्‍यो । राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र ब्युँताए । तर राजनीतिक दल र जनताले ०६२/६३ को जनक्रान्तिमार्फत राजतन्त्र समाप्त गर्दै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाए ।
राजाको निरंकुशतन्त्र, माओवादीको हतियारयुद्ध र दलहरूको लम्पटकालबाट त्रस्त, आक्रान्त र संवेदनाहीन बनाइएका नेपाली जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको दस वर्षपछि पनि तंग्रिन सकेका छैनन् । राज्यप्रणाली र शासन व्यवस्था नेताहरूको आचरण व्यवहारबाट स्वच्छ रूपले अगाडि बढ्न सकेन ।
नेताहरूले आफूलाई बिर्से । राणा, शाह र पञ्चायती शासनकालका भूमिगत संघर्ष, बलिदानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिदहरूलाई बिर्से । माओवादीले जनयुद्धमा जे भनेर जनतालाई संघर्षमा उतार्दै अठार हजार नेपालीको चिहान बनाए तर मर्नेहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानलाई नेताले नै बिर्से । लोकमान नियुक्तिबाट नेताहरूले आफूलाई जनप्रतिनिधि भन्नेसमेत स्वीकार नगरेको मात्र होइन, आफूलाई आम मानिसको रूपमा पनि नेताहरूले स्वीकार्न सकेनन् ।
राजाको निरंकुशतन्त्र, माओवादीको हतियारयुद्ध र दलहरूको लम्पटकालबाट त्रस्त, आक्रान्त र संवेदनाहीन बनाइएका नेपाली जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको दस वर्षपछि पनि तंग्रिन सकेका छैनन् ।
आफ्नो आचरण आमजनताको बनाउने त धेरै टाढाको कुरा भयो, महँगा रोलेक्स घडी लगाउनुपर्ने, फ्रान्समा बनेको कन्याक र स्कटल्यान्डमा बनेका ह्विस्की दैनिक रूपमा खानुपर्ने भयो । विदेशी दाताले पनि जिब्रो काड्ने चिल्ला गाडी चढ्नुपर्ने, कपालमा जेल हाल्नुपर्ने, नेता पत्नी पुतली झैं सिँगारिनुपर्ने भयो । यसको लागि अकूत सम्पत्ति जोड्नुपर्ने, सन्तानलाई युवराज/युवराज्ञी बनाउनुपर्ने, काला व्यापारी तस्कर, डनको पार्टनर बन्नुपर्ने भयो ।
गुन्डा तस्कर दलाललाई काखी च्यापेर हिँड्नुपर्ने, संगठनमा तिनकै बलले योग्य, क्षमता, निष्ठा, आस्था भएका इमानदार, लगनशील, काविल र पारदर्शी नेता/कार्यकर्तालाई पार लगाउने षड्यन्त्र गरिरहनुपर्ने भयो । यसैले गर्दा लोकमान प्रवृत्ति र प्रतिगमनकारीको चरण र शरणमा नेताहरू पुगे । तिनलाई नेताहरूले खेलाउनुपर्नेमा तिनैले नेताहरूलाई नराम्ररी खेलाउन थाले । तिनकै कुबुद्धि र सल्लाहमा नेता चल्न थाले । प्रतिगामी दलदलमा नेताहरू जाकिन पुगे ।
म को हुँ ? के गर्न राजनीतिमा लागेको थिएँ ? कुन पृष्ठभूमिबाट म आएको हुँ भन्ने पनि उनीहरूले बिर्से । नेता कुन मोडेलको हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो रणनीति/कार्यनीति नै नेतालाई पत्तो हुन छोड्यो । आफूलाई झार्नेहरू को हुन् ? नेताले चिन्नै सकेनन् । प्रतिगामीहरूको मुतको न्यानोमा डुबिरहे ।
निजी स्वार्थ पूरा गर्न नेताले घरपरिवार, भाइभतिजा, ज्वाइँ, भान्जा, छोरा/छोरीलाई नै पीए/सल्लाहकार राखे । उनीहरू तस्कर, गुन्डा र कालो बजारीबाट घेरिए । भनौं न, प्रचण्डको पीए उनकै छोरो प्रकाश छन् । अनि जुँगामुठे छोराको संगत र उसको आग्रहविरुद्ध प्रचण्डको के चलोस् ? नेताहरू पनि अधिकार र शक्तिको राप र तापले तस्कर दलालको दलदलको फन्दामा दिनपरदिन पर्ने नै भए ।
यो चक्रलाई औंल्याउन सक्ने आँट ज्ञान भएका कार्यकर्ता र आमजनको पहुँच नै नेता कहाँ पुगेन । सर्वसाधारण र सच्चा कार्यकर्ताबाट नेताहरू नराम्ररी टाढिए । जुन चंगुलमा हिजोका शासक/प्रशासक परेका थिए, परिवर्तनकामी नेताहरू प्रतिगामीहरूको त्यही चंगुलको चिम्टाले च्यापिए ।
तर पनि देश चलिरहेको छ । समस्या बुझेकाहरू चुनाव होला र देशले सही नेतृत्व पाउला भन्ने आशामा छन् । राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकले भने, यसमा अरू कसैको होइन, जबर्जस्त रूपमा उदारवादी अर्थव्यवस्थाका हिमायती र प्रयोगकर्ता टेक्नोक्रेट डा. रामशरण महतको भूमिका छ । बहुदलीय तथा गणतन्त्रकालमा पनि लामो समय अर्थमन्त्रीको रूपमा उनले नेपाली अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने अवसर पनि पाइरहे । उनले जोड दिएर भने, उदारवादी अर्थव्यवस्थाको विशिष्टताको कारण लोभीपापी, पिण्डे, निर्घिणी राजनीतिक नेता, भ्रष्ट प्रशासक र कर्मचारीहरू रसदपानीमा लोभिइरहे र समाज चलायमान भयो ।
सोमवार, कात्तिक ६, २०७४ बेचिंदै गएका खोला
कर्मचारी समायोजन नियमावली चाँडै 949
'पूर्वराजाको अभिव्यक्ति निरर्थक' 1863
'हेबीवेट' नेताका प्रतिस्पर्धी हेबीवेट नै 3799
बेचिंदै गएका खोला 26
युवती विवादमा गोली चलाउने पक्राउ 853
काठमाडौंको ठमेल अब 'सवारीसाधनमुक्त क्षेत्र' 519
फरकफरक दुर्घटनामा परी सुनसरीमा दुईको मृत्यु 531